သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်၌ရှိသည်။ - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2019-02 > သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အထဲ၌ကျိန်း!
ခရစ်ယာန်ပညာရှင်တစ် ဦး က“ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်သဲပေါ်တွင်အမှတ်အသားမရှိကြောင်း” ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကိုမမြင်နိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုအလွယ်တကူလျစ်လျူရှုပြီးအလွယ်တကူနားလည်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ယေရှုခရစ်တော်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်သည်လူသားဖြစ်သောကြောင့်ပိုမိုခိုင်မာသောမြေပေါ်တွင်အခြေပြုသည်။ ငါတို့အထဲ၌ကျိန်းဝပ်တော်မူသောဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌၊ ခမည်းတော်ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌မျက်နှာရကြပြီ။ သခင်ယေရှုကိုမြင်သောသူတို့သည်ခမည်းတော်ကိုလည်းမြင်ရပြီဟုသခင်ယေရှုကအခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။ ဖခင်ရောသားရောယနေ့ဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝသောခရစ်ယာန်များနှင့်အတူရှိနေသည်။ သူတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ခရစ်ယာန်များအတွင်း၌ရှိနေသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဝိညာဉ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပြီး၎င်းကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတွေ့ကြုံခံစားလိုသည်မှာသေချာသည်။ ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ယုံကြည်သူများသည်ဘုရားသခင်နှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုခံစားရပြီးသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအသုံးပြုရန်တန်ခိုးရှိသည်။
သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၏လမ်းပြမှုကိုခံယူသူများသည်ဘုရားသခင့်လူမျိုးတော်ဖြစ်သည်ဟုပေါလုပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်သူတို့၏သားသမီးများဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်အားသူတို့၏ဖခင်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်ကြသည်။ ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သော၊ သင်သည်အပြစ်တရား၏သဘောသဘာဝနှင့်အချည်အနှောင်မရှိတော့ပါ၊ ဘုရားသခင်နှင့်အတူစည်းလုံးညီညွတ်သောဘ ၀ သစ်ဖြင့်အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည်။ ဤအရာသည်လူတို့အားပြောင်းလဲခြင်းအတွက်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြုလုပ်နေသည့်အခြေခံကျသောပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။
Ihre Wünsche werden dadurch statt auf diese Welt, auf Gott ausgerichtet. Paulus sprach von dieser Umwandlung: "Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig – nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit – durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist" (Titus 3,4-5) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးနှင့်တည်ရှိမှုကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်၏ ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိသည်ကိုမည်သို့သိနိုင်သနည်း။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းရေးသူများဖြစ်သောအထူးသဖြင့်ပေါလုကဘုရားသခင့်ခေါ်တော်မူခြင်းကိုလူတစ် ဦး ၏တုံ့ပြန်မှု၏ရလဒ်မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်၌ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုလက်ခံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအတွေးအခေါ်ဟောင်းများကိုစွန့ ်၍ ၀ ိညာဉ်တော်နှင့်အညီနေထိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။
Deshalb müssen wir ermutigt werden, uns vom Geist leiten zu lassen, im Geist zu wandeln, im Geist zu leben. Wie dies zu tun ist, wird in den Büchern des Neuen Testaments in einem breiten Prinzip beschrieben. Der Apostel Paulus betont, dass Christen den Geist «anregen» sollen, der ihnen hilft, die Tugenden zuleben, die Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstkontrolle beinhalten (Galater 5,22-23) ။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းအရနားလည်သဘောပေါက်ထားသည့်ဤအရည်အသွေးများသည်သဘောတရားများသို့မဟုတ်ကောင်းသောအတွေးများထက်မကပါ။ သူတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးသည့်အတိုင်းယုံကြည်သူများအတွင်းဝိညာဉ်ရေးရာအစစ်အမှန်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ဤခွန်အားသည်ဘဝအခြေအနေတိုင်းတွင်အသုံးပြုရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
လက်တွေ့ကျင့်သုံးသောအခါသီလသည်အသီး (သို့) သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိကြောင်းသက်သေသာဓကဖြစ်လာသည်။ ၀ ိညာဉ်တော်၏စွမ်းအားကိုရရှိရန်နည်းလမ်းမှာဘုရားသခင်အား ၀ ိညာဉ်တော်၏ရောက်ရှိခြင်းကိုတောင်းခံခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင့်လူမျိုးတော်အား ၀ ိညာဉ်တော်ကလမ်းညွှန်သကဲ့သို့ဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားကျောင်းနှင့်အသင်းအဖွဲ့တို့၏ဘဝကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အသင်းတော်သည် ၀ ိညာဉ်တော်နှင့်အညီအသက်ရှင်သောယုံကြည်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏စုပေါင်းဖွဲ့စည်းပုံအနေဖြင့်ခိုင်ခံ့မြဲမြံစေနိုင်သည်။
ယုံကြည်သူများအတွင်း၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်မှု၏အရေးအကြီးဆုံးသက်သေပြမှုမှာအရည်အသွေးဖြစ်သည်။ ဤအရည်အသွေးသည်ဘုရားသခင်နှင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာလမ်းပြမှုခံယူသောယုံကြည်သူများကိုခွဲခြားသိမြင်စေသည်။ ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်တမန်တော်ပေါလုနှင့်အခြားဓမ္မသစ်ကျမ်းဆရာများ၏အဓိကအာရုံစိုက်မှုဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ခရစ်ယာန်တစ် ဦး ချင်းစီကိုအားကောင်းစေပြီးပြောင်းလဲစေနိုင်မလားသူတို့သိချင်ခဲ့ကြသည်။
Spirituelle Geschenke, Gottesdienst und inspirierter Unterricht waren (und sind) wichtig für die Kirche. Für Paulus war jedoch das dynamische Wirken der Liebe des Heiligen Geistes innerhalb der Gläubigen an Christus von weitaus grösserer Bedeutung. Paulus konnte «in den Zungen von Menschen und von Engeln» sprechen, (1. ကောရိန္သု ၁3,1) aber wenn ihm die Liebe fehlte, sei er nichts weiter als ein Krachmacher. Paulus könnte auch «die Gabe der Prophezeiung haben», in der Lage sein, «alle Geheimnisse und alles Wissen zu ergründen» und sogar «einen Glauben zu haben, der Berge versetzen kann» (Vers 2). Aber wenn ihm die Liebe fehlte, ist er nichts. Auch ein Lagerhaus biblischen Wissens oder fester Überzeugungen könnte die Befähigung der Liebe des Geistes nicht ersetzen. Paulus könnte sogar sagen: «Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und meinen Körper den Flammen übergebe, ohne Liebe zu haben, so nützt es mir nichts» (Vers 3). Auch eigene gute Werke für sich zu tun, sollte mit dem Wirken des Heiligen Geistes in der Liebe nicht verwechselt werden.
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တက်ကြွစွာရှိနေခြင်းနှင့် ၀ ိညာဉ်တော်၏တုံ့ပြန်မှုသည်ယုံကြည်သူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သောလူများ၊ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များသည်အသစ်တဖန်မွေးဖွားလာပြီးသူတို့၏ဘဝအသက်တာ၌ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရောင်ပြန်ဟပ်သူများဖြစ်လာကြသည်ဟုရှင်ပေါလုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ဤပြောင်းလဲမှုသည်သင့်အတွင်း၌ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုသာရှိသည်။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် ဦး ဆောင်။ နေထိုင်သောဘ ၀ မှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ဖြစ်သည်။